७० करोड कमिसनमा नयाँ खुलासा- प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्झौतामै रु. ५ अर्ब भ्रष्टाचार (भिडियो)::नेपाली मनको डिजिटल पत्रिका
विजयप्रकाश मिश्रले बोली फेरे : प्रधानमन्त्री ओलीलाई मैले अडियो दिएकै छैन् !
स्पेशिफिकेशनमा गलत तरिकाले ल्याउने, स्टडी रिपोर्टमा मूल्य वृद्धि गरेर ल्याउने कार्य भयो । साँढे पाँच अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।
प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा स्वीटजरल्यान्ड सरकार र कम्पनिको कुनै संलग्नता छैन । कम्पनिको एजेन्डा थियो तर एजेन्डा छाडेर गइसकेको छ ।
सुरक्षा प्रेससम्बन्धमा कोको जेल जाँदैछन् ? स्वीस एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रको खुलासा